မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့်အဆင့်မြင့်လှုပ်ရှားမှုများဘာတွေလဲ။ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Susana godoy | | ပညာရေး
အ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို၎င်းတို့ရည်မှန်းချက်အလိုက်ခွဲခြားသည် ထို့ကြောင့်ကုန်ကြမ်းများရယူခြင်း၊ ထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သည့်ကုန်ကြမ်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း၊ စီးပွားရေးအတွက်လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများဖြင့်စီးပွားရေးသံသရာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဤရွေ့ကားအပေါ်အရေးပါသောသက်ရောက်မှုရှိသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးနယ်ပယ်များလူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ရေ၊ လျှပ်စစ်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်လိုအပ်ချက်များရှိသည့်အပြင်၎င်းအပြင်ထို့အပြင်နေ့စဉ်ထုတ်ကုန်နှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားအမျိုးမျိုးကိုထုတ်ယူရန်ထုတ်ကုန်အချို့ကိုလည်းလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်စီးပွားရေးအဆင့်တွင်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းမှပေးအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ရောင်းရန်ရှိသောထုတ်ကုန်များစားသုံးမှုကိုထုတ်ပေးသည်။
မှတ်သားထားသင့်သည်မှာတစ်ခုကတစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်သည်၊ ထို့ကြောင့်တစ်ခုသည်တည်ရှိခြင်းကအခြားတစ်ခုကိုအထောက်အကူပြုသည်၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသောကဏ္sectorsများအကြားမဟာမိတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ အကြောင်းမှာပါဝင်သည့်ပါတီများအကြားကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုဖလှယ်မှုများရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးareaရိယာ။
ဤရွေ့ကားအားလုံးသည် ၀ င်ငွေရရန်ရည်ရွယ်သောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများကိုထုတ်လုပ်ရန်လမ်းပြသောအလေ့အကျင့်များဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးအရစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ကိုသူတို့ဖြည့်ဆည်းပေးသည့်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သဖြင့်၎င်းတို့ရရှိသောရည်မှန်းချက်ပေါ် မူတည်၍ နေရာတစ်ခုသတ်မှတ်ထားခြင်းကြောင့်အုပ်စုသုံးစုခွဲသည်။
အဓိကလုပ်ဆောင်မှုများသည်အရေးအပါဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းရင်း? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့အကြောင်းသူတို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအောင်မြင်မှုကိုအာရုံစိုက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုထုတ်ယူနိုင်သည် သူတို့ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရန်နှင့်ငွေရှာရန်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်စားသုံးရန်အတွက်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤလှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားများသည်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ပေါ်တွင်အမြဲမူတည်လိမ့်မည်ဟုဆိုနိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအရင်းအမြစ်များဖြစ်သောရေသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကဲ့သို့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီသဘာဝအရင်းအမြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးအသုံးပြုနိုင်အောင်ပြောင်းလဲဖို့မလိုပါဘူး။
အသုံးအများဆုံးဥပမာအချို့မှာမြေကိုစိုက်ပျိုးခြင်းသို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းမှစားသုံးရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်အတွက်လိုအပ်သောအစားအစာများထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဘာလဲ စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုထုတ်ပေးပါတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဥသို့မဟုတ်အသားများကိုထောက်ပံ့ပေးသောဝက်များသို့မဟုတ်ကြက်များနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်မွေးမြူခြင်းများတွင်လည်းအလားတူပင်။ ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းစိုက်ပျိုးရေးနှင့်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအစားအစာအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ role မှပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်အဓိကလုပ်ဆောင်မှုများသည်ထိုအရာများဖြစ်သည် သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှရရှိသည် ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအဓိကကုန်ကြမ်းများကို၎င်းတို့ထံမှရယူသုံးစွဲနိုင်သည်ဖြစ်စေအသုံးဝင်သည်ဖြစ်စေ၎င်းတို့အနက်မှအများဆုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ငါးဖမ်းခြင်းဖြေ။ ဒီနာမည်ကအဆိုပြုထားတာကကမ်းခြေနဲ့တော်တော်ဝေးတယ်။ ၎င်းကိုအားကစားငါးဖမ်းခြင်းဟုလည်းလူသိများသည်။ ကထဲတွင်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောကော့သို့မဟုတ် hake အဖြစ်မျိုးစိတ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါလှေပိုကြီးပြီးသူမ၏အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားကြသည်။ ရေဒါနှင့် sonar ကိုငါးကျောင်းများကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုသည်။
ကုန်းတွင်းပိုင်းငါးဖမ်းခြင်းဒီနေရာမှာငါးဖမ်းတာကကမ်းခြေနဲ့ပိုနီးတယ်။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုတဲ့လှေတွေကပိုသေးတယ်။ ဒီငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှာအဓိကအားဖြင့်ဆာဒီဒီနီ၊ မြင်းချားနှင့်ရေခွံအချို့ရှိတတ်သည်။
ဒါဟာလူအားဖြင့်ကျင့်သုံးအသက်အကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာထံအပ်နှံသည် တိရိစ္ဆာန်များမွေးမြူရေးနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ် သူတို့ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရန်သူတို့ထံမှအမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များရရှိရန်အတွက်အခြားသူများအကြားနွား၊ ဝက်၊ ကြက်၊ ကြက်ကဲ့သို့သောအိမ်တွင်းဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်။
၎င်းသည်လူတို့များသောအားဖြင့်စားသုံးသည့်ပရိုတင်းများနှင့်ဓာတ်သတ္တုများအများဆုံးသိုလှောင်ထားသောအစားအစာများဖြစ်သောအမဲသား၊ နို့၊ ဒိန်ခဲ၊ ကြက်ဥနှင့်ကြက်သားများကဲ့သို့သောအခြားများစွာသောအစားအစာများကိုရရှိသည်။
၎င်းအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောareasရိယာအတွင်းရှိတိရိစ္ဆာန်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမျိုးအစားကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်။ သူတို့လုပ်တာကသူတို့ဟာသော့ခတ်ထားလို့မရဘူး၊
၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုအနည်းငယ်နိမ့်ကျသည်မှာမှန်သော်လည်း အခြားတစ်ဖက်တွင်, တိရိစ္ဆာန်များသော့ခတ်ထားပါတယ်သောတတဖြည်းဖြည်းကွယ်ပျောက်သောတစ်ခုရှိပါသည် နည်းပညာပိုမိုသုံးခြင်း ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုပိုမိုများပြားသောထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အားဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံး။ ၎င်းသည်ကောက်ပဲသီးနှံ၊ တူညီသောအသီးများ၊ အမြစ်များနှင့်အရွက်များကဲ့သို့သောသူတို့၏အသီးများကိုရရှိနိုင်ရန်အပင်စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်၏အသားတင်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိခဲ့သောအဓိကလုပ်ဆောင်မှုများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီတော့နည်းနည်းမကြာသေးမီကခေတ်မီခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကတည်းကသင်သည်လည်းပိုမိုဂန္ထဝင်အသုံးအဆောင်များသို့မဟုတ်အချို့သောပိုပြီးခေတ်သစ်ယန္တရားများသို့မဟုတ်စက်တွေထည့်သွင်းထားတဲ့အချို့၏အကူအညီကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ခေတ်သစ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသည် ပိုမြန်အလုပ်လုပ်သောလေးလံသောစက်များ နှင့်ထိရောက်သော။
သတိပြုသင့်သည်မှာဤအဓိကလုပ်ဆောင်မှုမှလူသားများစားနပ်ရိက္ခာအတွက်လိုအပ်သောဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုပေးသောအစားအစာများဖြစ်သောဆန်၊ ပဲ၊ ပြောင်းနှင့်ဂျုံစသောအစားအစာများဖြစ်သည်။
၎င်းသည်မြေကြီး၏မြေဆီလွှာသို့မဟုတ်မြေအောက်မြေဆီလွှာတွင်တွေ့ရသောဓာတ်သတ္တုများထုတ်ယူခြင်းကိုရည်ညွှန်းပြီး၎င်းကိုအီလက်ထရောနစ်ဖြစ်စေ၊ အိမ်သုံးချည်ကဲ့သို့ဖြစ်စေ၊ များစွာသောဒြပ်စင်များထုတ်လုပ်ရာတွင်လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များကိုရယူရန်စီမံသည်။
သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွင်းမှာငါတို့ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် သတ္တုဓာတ် ထိုကဲ့သို့သောအခြားသူများအကြားလူမီနီယမ်, သံသို့မဟုတ်ခရိုမီယမ်အဖြစ်။ ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသတ္တုမဟုတ်တဲ့ဆာလ်ဖာတွေအကြောင်းကိုလည်းပြောကြပါတယ်။ လောင်စာဆီများအပြင်ကျောက်မျက်ရတနာကဲ့သို့သောကျောက်အမျိုးအစားများမှတဆင့်လည်းအဓိကလုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်သတ္တုတူးဖော်ရေးသည်အရေးကြီးသောနည်းပညာအဆင့်ဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလုပ်သားအင်အားကိုလျှော့ချခဲ့သည်။
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များသည်စီးပွားရေး၏အခြေခံဖြစ်သည်။ တနည်းကား, ငါတို့ရှိသည်အဓိကဖော်ပြချက်ငါးခုထဲကတစ် ဦး ချင်းစီသည်အသီးအသီးကယ့်ကိုအရေးကြီးတယ်ကြောင်းဖော်ပြရပေမည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငါတို့ဘဝဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အခြေခံအစားအစာတွေ၊ အရင်းအမြစ်တွေကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးနေလို့ပဲ။
တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များ၏အရေးကြီးပုံမှာ၎င်းတို့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အခြေခံကျပြီးစစ်မှန်ကြောင်းဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မရှိရင်ငါတို့ကတခြားလှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားတွေကိုနားမလည်နိုင်ဘူးလေ။ ဆိုလိုသည်မှာဤမရှိဘဲဖြစ်သည် ကုန်ကြမ်း ၎င်းသည်အသက်ရှင်ရန်လိုအပ်သောအစားအစာသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကုန်ကြမ်းများထုတ်ယူပြီးနောက်နောက်ခြေလှမ်းတစ်ခုမှာ၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်စားသုံးမှုအကြောင်းပြောပါကအစားအစာသည်ကမ္ဘာမှစားပွဲသို့ကူးပြောင်းသွားသည်။
၎င်းသည်ထုတ်ကုန်အသစ်များဖန်တီးမှုအပေါ်အခြေခံသည် လုပ်ငန်းကဏ္fromမှရရှိသောကုန်ကြမ်းများမှဖြစ်သည် မူလတန်း၎င်းကိုစီးပွားဖြစ်လုပ်ရန်၊ ဆိုင်များသို့ရောင်းချရန်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများသို့တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက်ဤတာဝန်ခံသည်အရေးကြီးဆုံးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများမှာ -
ဒါဟာပိုပြီးလိုအပ်သောဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် လူ့အလုပ် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအထက်တွင်သာမကပိုမိုရိုးရှင်းသောစားသုံးသူများ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ထုတ်ကုန်များဖန်တီးမှုအပေါ်အခြေခံသောမြို့ပြဒေသများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်သည်။
ဤလုပ်ငန်းကဏ္secondaryများတွင်ဖိနပ်၊ အ ၀ တ်အထည်၊ အစားအစာ၊ ကစားစရာများထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည်။
ဒီ၌ကြီးစွာသောဝင်သော ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို, အရေးအကြီးဆုံးအချက်အနေနှင့်အလွန်ကြီးမားပြီးလေးလံသောထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကြီးမားသောစက်ယန္တရားများလိုအပ်သည်၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်များသောအားဖြင့်မြို့ပြဒေသများနှင့်ဝေးကွာရသည့်နေရာများရှိသည်။
ဤစက်ရုံများသည်များသောအားဖြင့်ကားများ၊ လေယာဉ်ပျံများ၊ လှေများ၊ အကြီးစားစက်ယန္တရားများနှင့်အခြားကုမ္ပဏီများအားရောင်းချရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ယင်းတို့ကို "မိုးသည်းထန်စွာ" ၏အမည်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။
ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ညစ်ညမ်းမှုများကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများကြောင့်လူမှုရေးအဆင့်တွင်အကြီးအကျယ်အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအချို့သောသတ္တဝါများနှင့်အပင်မျိုးသုဉ်းခြင်းများကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
၎င်းတို့သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းသို့ပေးအပ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဓိကထားသည်။ အဓိကနှင့်အလယ်တန်းလုပ်ငန်းများမှထုတ်လုပ်သောကုန်ပစ္စည်းအချို့သည်အခြားကဏ္sectorsများမှရရှိသောထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချရန် ရည်ရွယ်၍ ဖန်တီးထားသောစတိုးဆိုင်များဖြစ်သည်။
ဤလုပ်ဆောင်မှုများသည်၎င်းတို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။
ပြည်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများ: ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မီးသတ်သမားများ၊ သန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေးအပါအ ၀ င်အခြားသူများပါဝင်နိုင်သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်း အသုံးပြုသူသည်ဗဟုသုတမရှိသောနေရာများသို့အလည်အပတ်ရောက်စေသည့်ဟိုတယ်များ၊ ရေကြောင်းသို့မဟုတ်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ခရီးသွား gu ည့်လမ်းညွှန်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများ၊ ဆေးဆိုင်များ၊ လူနာတင်ယာဉ်များနှင့်အခြားပြည်နယ်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အချို့သောနိုင်ငံများတွင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အများပြည်သူနှင့်အခြားသူများအတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီများ၊ အင်တာနက်နှင့်စာတိုက်ကဲ့သို့။
အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေး: ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူတို့၏ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အာရုံပျံ့လွင့်မှုတစ်ခုတည်းအတွက်သာရည်ရွယ်သည်။ အခြားသူများအကြားရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဘိုးလင်းကဲ့သို့သောဂိမ်းစက်ရုံများ၊ သေးသေးလေးဂေါက်ကွင်း၊ လောင်းကစားရုံများ၊ ရေပန်းဥယျာဉ်များကိုဖော်ပြပါ။
အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ: ၎င်းတို့တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများနှင့်ပါ ၀ င်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များဖြစ်သည့်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်း၊ အွန်လိုင်းအကြံဥာဏ်နှင့်ကြားတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုပါဝင်သည်။
စီးပွားဖြစ် ၀ န်ဆောင်မှုများ: ဥပမာအားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအတွက်စတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်အသုံးပြုသောကားအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များဥပမာ ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု » ပညာရေး » မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့်တတိယအဆင့်လှုပ်ရှားမှုများ
လော်ရာ oausini ဟုသူကပြောသည်
laura oausini အားပြန်ကြားပါ
Seneca ၏ +30 အကောင်းဆုံးစာပိုဒ်တိုများ